Kuwani waa qalabka ugu isticmaalka badan | Bezzia
Kuwani waa qalabka ugu isticmaalka badan
Sida laga soo xigtay Machadka Kala-duwanaanshaha iyo Badbaadinta Tamarta (IDAE), celceliska guriga Spain wuxuu isticmaalaa qiyaastii 4.000 kWh sannadkii. Nidaamyada kuleylinta oo ay la socdaan qalabyada waaweyn waa kuwa qalabka ugu lug leh Isticmaalka tamartan, isagoo awood u leh inuu gaaro 60% wadarta guud.
Si loo badbaadiyo biilka korontada Waxaa muhiim ah, sidaas darteed, in la ogaado qalabka ugu isticmaalka badan. Ma ku dhiiran lahayd inaad qiyaasto waxay yihiin? Ma u malaynaysay talaajadu inay tahay doorashada kowaad? Markaa maad dhumin.
1 Isticmaalka tamarta ee qalabka
2 Qalabyada ugu badan ee isticmaala
2.1 qaboojiyaha iyo qaboojiyaha
2.2 Mashiinka dharka lagu dhaqo
Isticmaalka tamarta ee qalabka
Isticmaalka qalabka korontada shuruudaha biilka korontada. Laakin qaabkee? Si loo xisaabiyo kharashaadkooda tamarta aad bay muhiim u tahay in la ogaado inta ay le'eg tahay tamarta ay isticmaalaan marka aad isticmaasho, iyo marka aanad isticmaalin. Ogaanshaha kuwa ugu saameynta badan, kaliya waxaad u baahan doontaa inaad barato sida loo maareeyo isticmaalkooda si aadan tamarta u lumin oo aad u yareyso qadarka biilka koronto.
Xisaabi isticmaalka qalabka guriga Waa hawl fudud. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa ay tahay awooda korantada ee aaladda oo ku dhufo waqtiga isticmaalka. Xogta ugu horeysa ee aad ka heli karto kaaga sumadda tamarta. Intaa waxaa dheer, waxaa jira qalab sida wattmeter, kaas oo sidoo kale kaa caawin kara inaad xisaabiso. Aaladahani waxay xisaabiyaan awoodda uu qalab kastaa isticmaalo si gaar ah iyo sidoo kale isticmaalka tamarta inta lagu jiro muddada hawlgalka. Ha iloobin, in kastoo, qalabyada heeganka ku jira ay sidoo kale saamayn ku leeyihiin biilka korontada.
Markaad xisaabiso kuwan waxaad ogaan doontaa inay jiraan dhowr qalab oo isticmaala tamar aad uga badan kuwa kale, laakiin waxay sidaas u sameeyaan sababo kala duwan. Waxa loo qaybin karaa laba kooxood, kuwa cuna…
Tamar badan waqti ku habboon. Waa kuwa awood badan ku cuna wakhtiga ku habboon. Tusaale ahaan, foornada, weelka dhoobada ah ama mashiinka dharka lagu dhaqdo.
Tamar yar laakiin waqti dheer ama joogto ah. Qalabkani waxa ay leeyihiin isticmaal yar (si fiican uga hooseeya 1.000 watts) laakiin isticmaalkoodu waa dheer yahay. Tusaalaha ugu cad cad waa kan qaboojiyaha iyo qaboojiyaha kuwaas oo u baahan inay jiraan maalintii oo dhan oo aan kala go' lahayn.
Qalabyada ugu badan ee isticmaala
Haddaba waa maxay qalabka ugu badan ee isticmaala? Shaki la'aan, the qalabyada isticmaalkoodu yahay sii wad sida qaboojiyaha iyo qaboojiyaha, oo mas'uul ka ah ilaa 22% wadarta tamarta guriga, ma rumaysan kartaa? Oo kuwan ka dib? Mashiinnada dharka lagu dhaqo, makiinada weelka dhaqda, foornooyinka korontada ku shaqeeya, kombiyuutarada iyo telefishinada.
qaboojiyaha iyo qaboojiyaha
Thanks to IDAE kala duwan iyo daraasadaha Eurostat, waan ogaan karnaa celceliska isticmaalka sanadlaha ah ee qalabka guriga waxay ku cunaan inta ugu badan qoyska Isbaanishka. Daraasadahan, talaajadda waxaa loo soo bandhigay inuu yahay aaladda isticmaasha korontada ugu badan ee guriga. Midda kaliya, dhanka kale, taas oo la isticmaalo 24 saacadood maalintii xitaa guryaha labaad.
Talaajaduhu waxay ka dhigan yihiin ilaa 22% wadarta qiimaha korontada guryaha sida uu qabo IDEA iyo ilaa 31% marka loo eego daraasaadka OCU. Isticmaalkaani wuxuu inta badan ku xiran yahay waxtarka tamarta ee aaladda, xaqiiqda ah in aan ku ogaan karno markaan eegno calaamadeeda tamarta. Talaagad leh heerka tamarta C, celceliska qiimaha sanadlaha waa 83,98 euro. Xaqiiqo ah in la gooyn karo iyada oo la hagaajinayo waxtarka iyo sharadka moodooyinka leh awoodda la hagaajin karo.
Mashiinka dharka ayaa ah qalabka saddexaad ee liiska ugu isticmaalka badan oo leh 255 kWh sannadkii. Ma ogtahay in 80% isticmaalka tamarta ee qalabkani uu ka yimaado kuleylka biyaha? Sababtan awgeed, waa lagu talinayaa dharka ku dhaq heerkul hooseeya ama biyo qabow leh. Intaa waxaa dheer in lagu sharadka moodooyinka hufan ee barnaamijyada "eco" ee yareynaya isticmaalka tamartaas.
Makiinada, qalajiyaha, foornooyinka korontada, iyo telefishinada sidoo kale waa qalab guri oo si weyn loo isticmaalo. Oo haddii aad eegtay miiska daraasadda IDAE iyo Eurostat, malaha wax kale ayaa soo jiitay dareenkaaga. Miyaad dareentay ilaa xad intee le'eg oo heeganku u saameeyaa isticmaalka tamarta? Miyaanad u malayn in tiradu muhiim tahay in ku filan oo lagu saxo?
Hadda oo aad ogtahay qalabka ugu badan ee isticmaala, wax tallaabo ah ma ka qaadi doontaa guriga? Ku badbaadi biilka korontada Waxay ku jirtaa gacmahaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Guriga » Kuwani waa qalabka ugu isticmaalka badan
Cunto noocee ah ayaa aad cuni lahayd haddii aad shuban tahay?
Waqti ku qaadashada dibadda waxay ka hortagtaa cudurrada carruurnimada qaarkood